[Tribune] Saliid ku hadasha Afka-Faransiiska ee Galbeedka Afrika, Dahab madow ama "qashinka Shaydaanka"? - YoungAfrica.com - KU SOO DHAWEYN
ACCUEIL » DHAQAALAHA [Tribune] Saliid ku hadasha Afka-Faransiiska ee Galbeedka Afrika, Dahab madow ama "qashinka Shaydaanka"? - YoungAfrica.com
[Tribune] Saliid ku hadasha Afka-Faransiiska ee Galbeedka Afrika, Dahab madow ama "qashinka Shaydaanka"? - YoungAfrica.com
Niger, Senegal iyo Mauritania waxay qarka u saaran yihiin inay u dhawaadaan wadamada dhoofinta batroolka. Laakiin gadaasha dabaysha, halista ayaa weyn.
Tribune waxay si wada jir ah u saxeexeen Ousmane Kane, wasiirkii hore ee maaliyadda ee Mauritaniya, iyo Amaury de Féligonde, oo ah lamaanaha Okan, istaraatiijiyad iyo shirkad wadatashi maalgalin ah oo u heellan Afrika.
Waxyaabaha la soo saaray waxaa ka mid ah shidaal-soo-saaris sannadihii la soo dhaafay ku hadla Afka-Faransiiska ee Galbeedka Afrika. Turtle mega-gasification ee Turtle, oo ay wadaagaan Senegal iyo Mauritania, waa inay ka soo baxaan 2021 waxayna ku soo kordhin karaan Senegal xagga sare ee 10 soo saarayaasha Afrika. Niger, oo ay taageerayaan la-hawlgalayaasheeda Shiinaha, ayaa isku diyaarinaya in ay bilaabaan dhuun horseed u ah Benin si ay dhoofinta saliiddeeda uga dhoofiso caalamka.
On qaarad halka "manna saliida" ayaa inbadan noqotay habaar il laga helo horumar waara, daahitaanadan ma yihiin war wanaagsan? Waa kuwan qaar ka mid ah qaababka loo adeegsado haro-harooyinkaas inay noqdaan "dahab madow", oo awood u leh inay maalgeliyaan horumarka bulsho iyo dhaqaale ee waddamadan, mana ahan kan "qashinka shaydaanka" (ereyada Juan Pablo Pérez Alfonzo, isuduwaha aasaasaha OPEC) , qodobka musuqmaasuqa, dhibaatooyinka deegaanka iyo isku dhaca bulshada.
Tababar shaqaalaha gudaha
Maaddaama ay jiraan xoolo ragga oo keliya, maalgashiga koowaad ee Dowladaha waa in ay noqdaan tababbarka shaqaalaha iyo maareeyayaasha, gaar ahaan kuwa ku jira wershadaha soosaarka. Miisaaniyadda la'aanteed, ma jirto "waxa ku jira" maxalliga ah, maadaama isticmaalka kheyraadka dalka aan la go'aamin: shaqaalaha, inay qodaan oo ay dhisaan howlo farsamo, horjoogeyaal, inay hogaamiyaan kooxaha, injineerada, maal-galiyayaasha.
Waa fikirkaan in Machadka Qaranka ee Saliidda iyo Gaaska laga bilaabay Senegal, waana tillaabada koowaad ee jihada saxda ah. Intaas waxaa sii dheer, Dowladaha waa in ay fududeeyaan horumarka shirkadaha maxalliga ah iyo xoojinta shirkadaha wadaniga ah si maamulayaasha caalamiga ah ee ka shaqeeya lacagta dhigaalka ay u gudbi karaan aqoontooda.
Waxay qaadatay muddo nus qarni ah Sacuudi Aramco la wareegaan kheyraadkiisa qaran, iyadoo xoogaa guul ah. Waa inaan sidoo kale ka fikirnaa "saliida-dambe", ilahaan dabiiciga ah aan la cusboonaysiin karin. Dowladaha waa in lagu soo daro inay dhigaan sharci saliid faa'iido leh isla markaana sare u qaada kirada. Sanadlaha ku habboon, sidoo kale, in si habsami leh loo maareeyo.
Saddex godad ayaa la sugaa. Dhinac, ku bixi adigoo aan ka walwalayn mustaqbalka ama baahiyaha dhabta ah (maalgalinta "maroodiga cad"). Dhanka kale, iska dhigista dhammaan kharashyada si loo abuuro 'lacag aan macquul aheyn oo loogu talagalay' jiilalka mustaqbalka (sida midka Bangiga Adduunku 'uu ku soo rogay' Chad) macnaha halka 'mustaqbalku horeba halkan', inta badan tirada dadka ka yar 20 sano. Ugu dambeyntii, u dulqaado dhaqan xumada musuqmaasuqa ku ah umadda oo dhan, muuqaalka fadeexado la xiriira Petrobras ee Brazil.
Dib u soo noqoshada qaybaha kale
Cudurka '' Dutch Dutch '', oo ah isha laga helo isu dheellitir la'aanta dhaqaale-xumada iyo jeermis-ka-dhigista dharka waxsoosaarka, ayaa ah culeys kale. Tusaalaha reer Nigeria wuxuu ku hadlayaa: soosaaraha ugu weyn ee wax soo saarka beeraha ee Afrika sanadihii 1960, noqo soo dejiyeyaasha ugu weyn ee cuntada, ku guuldaraysiga soo saarista deegaanka. Waxay umuuqataa inay qatartaani tahay - ugu yaraan muddada gaaban - tuur. Senegal iyo Mauritania waxay leeyihiin keyd dhexdhexaad ah marka la barbar dhigo xayawaannada Nigeria, Algeria iyo Angola. Qof kastaa wuu jiidi lahaa Turtle, ugu dambeyntiina, 1 bilyan oo doollar oo dakhli ah: tabaruc weyn iyo soo dhoweyn, laakiin ma ahan kacaan.
Maamulka waa inuu dejiyaa siyaasad dhowris oo deegaanka ilaalinaysa
Si kastaba ha noqotee, dawladuhu waa inay saadaaliyaan marxaladda ka dambeysa saliida kadib markay dib u helaan qayb ka mid ah "manna" waaxaha koritaanka (kaluumeysiga, beeraha, dalxiiska). Ugu dambeyntiina, mas'uuliyiinta iyo hawl wadeennada shidaalku waa inay dejiyaan siyaasad ilaalin deegaanka oo adag si looga fogaado shilalka suurta gal ah (sida Deepwater Horizon Gacanka Mexico), xaalad Afrikaan ah oo jilicsan (duullimaadyo iyo budhcad-badeednimo ka dhacday Niger Delta oo ay ku wasakheeyeen dhiig-miirashada saliidda ee koonfurta Nigeria).
Waxyaabahan cusub ee la helay waxay keeneen rajo weyn oo nolol wanaagsan dadka loogu helo. Masuuliyad weyn ayaa saaran hoggaamiyeyaasha waddamadan: waa inay muujiyaan awoodda ay u leeyihiin inay la gorgortamaan xeryaha, anshaxa aan laga maarmi karin, iyo aragti istiraatiijiyadeed oo cad. Senegal, Mauritania iyo Niger ma ka gudbi doonaan "habaarka badeecada", sida moodooyinka Botswana, Chile ama Norway? Mustaqbalka ayaa sheegi doona.
Congo-Brazzaville: waa madal loo maro waddo dhinacyo badan oo dhex mara Shiinaha iyo qaaradda - JeuneAfrique.com
Iyada oo la socota Prosus, Naspers ayaa ku xoogaysata suuqa saamiyada Amsterdam - JeuneAfrique.com
Fief royale: comment Harry a exposé ses & # 039; défis & # 039; il fait face à Meghan, Kate et William
DADKA & LIFESTYLE4,612